मलेसियामा महाथीर पुन: प्रधानमन्त्री हुने, विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अतिथि कलाकार जितेन राई,गायीकाद्वय सुनिता थेगिम र पूजा सुनुवार लाई कुवेतको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भब्य स्वागत ।
नेपाल छिरे ब्ल्याक क्याटहरू →
मलेसियामा महाथीर पुन: प्रधानमन्त्री हुने, विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत
६१ वर्षदेखि सत्तामा रहेको दल पराजित
मलेसिया — मलेसियामा बुधबार सम्पन्न १४ औं आमनिर्वाचनमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ९२ वर्षिय डा. महाथीर बिन मोहम्मदको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको बताइएको छ । यस जितसँगै महाथीरले विश्वकै बयोवृद्ध नेताका रुपमा मलेसियाको सत्ता सम्हाल्ने पक्का भएको छ ।
६१वर्षदेखि सत्तामा रहेको ‘बारिसन नेशनल’ गठबन्धनलाई निकै पछाडि छोड्दै विपक्षी गठबन्धन ‘पाकातन हरापन’ प्रतिनिधि सभाको २२२ सिटमध्ये ११३ मा जित हासिल गरिसकेको छ । सत्तारुढ दल भने मात्र ७९ सिटमा विजयी भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको २२२ सिटमध्ये २ तिहाइ बहुमतका लागि १४८ सिट जितको आवश्यकता पर्छ । सरकार संचालनको लागि सामान्य बहुमत ल्याउन ११४ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ । डा. महाथीर मलेसियाको चौथो प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् भने उनले यसअघि करिब २२ वर्ष ९जुलाइ १६, सन् १९८१ देखि २००३ अक्टोबर ३१ सम्म० प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । महाथिरलाई मलेसियाको आधुनिक विकासको प्रणेतासमेत मानिन्छ ।
सन् २००९ देखि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्री ६४ वर्षिय नाजिब रजाक पूर्व प्रधानमन्त्री अब्दुल रजाक हुसेनका पुत्र हुन् । नाजिब विवादास्पद देखिएपछि डा। महाथिरले आफ्नो राजनीतिक जीवन शुरु गरेको पार्टी ‘युएमएनओ’ गत सन् २०१६ फेब्रुअरीमा परित्याग गरी नयाँ पार्टी स्थापना गरेका थिए ।
यसअघि सन २००८ र २०१३ मा सम्पन्न दुवै चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो ‘पपुलर भोट’ गुमाएको थियो । विभिन्न १३ राजनीतिक दल सामेल सत्तारुढ गठबन्धनले सामान्य बहुमत मात्र ल्याएको थियो ।
बुधबारको चुनावमा मलेसियाली प्रतिनिधिसभाका २२२ र प्रदेश सभाका ५८७ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।(कान्तिपुर )